ဤသဘောနားလည်နိုင်စေခြင်းငှာ “စုံစမ်းခြင်း” ဆိုသော စကားမှာ ဂရိဘာသာဖြင့် “Peirasmos” ၏ အဓိပ္ပါယ်ကို နားလည်ရန် လိုပါသည်။ ဤ ဂရိစကား၌ (၂) မျိုး အဓိပ္ပါယ် ရှိပြီး “ဒုက္ခဆင်းရဲ” (Trial) လည်းဖြစ်နိုင်ပြီး ဤထက်ဆိုးဝါးသော မကောင်းဘက်သို့ ဆွဲသွင်းခြင်း (Tempt) ဟူသော အဓိပ္ပါယ်လည်း သက်ရောက်ပါသည်။ ဤနေရာ၌ ဆိုလိုသည်မှာ “ဒုက္ခဆင်းရဲ” ခြင်းကိုဆိုလိုပါသည်။ ယာကုတ် ၁း၃ ၌ ဆိုထားသကဲ့သို့ ဘုရားသခင်သည် လူသားများပျက်စီးရန် စုံစမ်းလေ့မရှိပါ။ သို့ဖြစ်၍ ဤကမ္ဘာလောက၌ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသော ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းမှ ကယ်နှုတ်ပြီး ကာကွယ်သည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ဤကဲ့သို့သော ဆင်းရဲဒုက္ခများကို လူသားများအား ခံစားနေစေနိုင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ထိမိလဲရန် အလိုမရှိ၊ ရင့်ကျက်၍ တိုးတက်ရန် အလိုရှိပါသည် (၁ကော ၁၀း၁၂-၁၃)။ ထိမိလဲရန် အလိုမရှိ၊ တိုးတက်ရင့်ကျက်စေရန် နှင့် တည်မြဲဖို့ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ပန်းဘဲသမားများက သံကို ရင့်မာစေရန် အပူပေးလောင်ကျွမ်းစေသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
(က) ကိုယ့်အကြောင်းနားလည်ပါ။ ဂရိပညာရှင် ဆိုကရေးတီး က ပညတ်တော်ထဲ၌ အလေးနက်ဆုံးမှာ “ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ်သိပါ” (Know thyself) ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ၀ိညာဉ်တော်နှင့် အသက်ရှင်နိုင်စေခြင်းငှာ အရေးကြီးသော အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ်သိဖို့လိုပါသည်။ မည်ကဲ့သို့ ကိုယ့်အကြောင်း သိရမည်နည်း၊ ရှင်ပေါလုက ခရစ်ယာန်များသည် “သန့်ရှင်းသူများ” (Saints) ဟု ဆိုခဲ့ပေသည် (ရောမ ၁း၇၊ ၈း၂၇၊ ကော ၆း၂၊ ဧ ၂း၁၉၊ ၃း၈)။ ခရစ်တော် ယုံကြည်သူတိုင်း သန့်ရှင်းသူများဖြစ်ကြပါသည်။ ငါတို့ သန့်ရှင်း၍ မဟုတ်ပဲ ကယ်တင်သူ ယေရှု အသွေးတော်ကြောင့် သန့်ရှင်းရခြင်းဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းစေသူ ဘုရားသခင်ရှိသောကြောင့် “သန့်ရှင်းသူ” နာမည်ကောင်းရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ မာတင်လူသာက “သန့်ရှင်သူများ ဟု ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်း ခံရသူများမှာ အပြစ်သားဘ၀မှ ဖြောင့်မတ်သူ အဆင့်သို့ သတ်မှတ်ခြင်း ခံရသူများဖြစ်သည်” (The saints are justified sinners) ဟုဆိုသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကိုယ်လုပ်ဆောင်မှုနှင့် ကိုယ်၏ ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့် မဟုတ်၊ ကယ်တင်သူ၏ အသွေးတော်နှင့် ငါတို့ကို ပိုင်သသောသူကြောင့်သာ “သန့်ရှင်းသူ” များဖြစ်ကြသည်။ သန့်ရှင်းသူဖြစ်သည့်အကြောင်း အမြဲသိရှိသူသည် အရာရာတွင် သတိထားပြီး မကောင်းမှု ရှောင်ရှားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အပြစ်လုပ်မည့်ဆဲဆဲ “မဟုတ်သေးဘူး၊ သန့်ရှင်းခြင်း ရရှိသူပါလား” ဟု သတိပြုမိပါက ဆက်လက် ပြုလုပ်ရန် ဆန္ဒရှိတော့မည်မဟုတ်ပါ။ အပြစ်တစ်ကိုပြုလုပ်ရန် စဉ်းစားမိတိုင်း မိမိ၏ ရပ်တည်ချက်ကို သတိရပါက အရှက်တရားဝင်လာပြီး ရှောင်ရှားနိုင်ပါလိမ့်မည်။
This entry was posted on June 7, 2011 by thawngno in Articles Christian Life, Rev. Dr. Simon Pau Khan En and tagged Prayer, Rev. Dr. Simon Pau Khan En.	Shortlink